သင့်ကိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့သူရှိရင် - Kanaung News
လူတစ်ယောက်ကိုယ့်ကို စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာကို သင်ကြုံဖူးမှာပါ။ အကြောင်းတစ်ခုခုလွဲချော်မှုကြောင့် သင့်ကို လူတစ်ယောက်က စိတ်ဆိုးတာမျိုး၊ သင့်အလုပ်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် သင့်အလုပ်သူဌေးက သင့်ကိုစိတ်ဆိုးတာမျိုး၊ သင့်ယောက္ခမနဲ့ အဆင် မပြေဘဲ စကားများတာကြောင့် စိတ်ဆိုးတာမျိုး၊ ကားငှားစီးချိန်မှာ မတော်တရောဈေးတောင်းလို့ ကားသမားကို စိတ်တိုတာမျိုးစတဲ့ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းကိစ္စတွေကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ တချို့လူတွေက အသံကျယ်ကျယ် အော်ဟစ်ပစ်လိုက်တာမျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်တတ်ကြပြီး တချို့တွေကတော့ ငြိမ်သက်နေတတ်ကြပါတယ်။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ငြင်းခုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ဖြစ်စရာ အကြောင်းပဲရှိပြီး အကျိုးရလဒ်က မကောင်းတတ်ပါဘူး။
ဘယ်သူမဆို တရားနည်းလမ်းတကျ ဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာကို ကြိုက်နှစ်သက် တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုမျိုးတရားနည်းလမ်းတကျ ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ရုတ်တရက် စဉ်းစားနိုင်ဖို့ တော်တော်ကို ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ တရားနည်းလမ်းတကျ မှန်ကန်စွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ် တတ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုကို မဖြေရှင်းခင်နဲ့ ဒေါသတွေအရမ်းထွက်နေချိန်မှာ ခဏလောက်အချိန်ယူပြီး စိတ်အေး လက်အေးထားဖို့ဟာ ပြောသလောက်တော့ မလွယ်ကူတတ်ပါဘူး။ သင့်အတွက် စိတ်သက်သာရာရစေပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ မရှိနိုင်အောင် နည်းလမ်းလေးတွေကို အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တချို့က အကြံပေးထားပါတယ်။
(၁) ငြိမ်သက်နေမှုက အဖြေတစ်ခုပါ စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် ဒေါသနဲ့ပြန်ပြီး တုံ့ပြန်တာဟာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ပိုမိုစေနိုင်တဲ့ အကြောင်း ရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုလူတစ်ယောက်က စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင် ခဏလောက်တော့ ငြိမ်သက်နေပေးလိုက်ပါ။သင် ငြိမ်သက်ပြီး စကားမပြောဘဲနေတာက တစ်ယောက်တစ်ခွန်းစကားများရန်ဖြစ်တာထက်စာရင် ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကို ရရှိနိုင်ပါ လိမ့်မယ်။
(၂) အခြေအနေမှန်တစ်ခုကိုရအောင်ရှာပါ ဘာကြောင့် သင့်ကိုစိတ်ဆိုးရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကို သိဖို့အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဘာအကြောင်းမှမသိဘဲ သူစိတ်ဆိုးတာ နဲ့ သင်ကပါလိုက်ပြီး စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုရင် အခင်အမင်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် မသင့်မြတ်တာဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခု ကို သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။သင့်အထက်က အထက်လူကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုး၊ လုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာမျိုးနဲ့ အမှုကိစ္စအတော်များ များမှာ အခြေခံအကြောင်းရင်းတစ်ခုက အရမ်းကိုအရေးကြီါ်ပါတယ်။အဖြေတစ်ခုကိုရရှိနိုင်ဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း တစ်ခု တော့ ရှိနေမှာပဲဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ ကိစ္စတစ်ခုကို ဖြေရှင်းလိုက်တာက မျိုသိပ်ထားတာထက်စာရင် ပိုပြီး ခံစားရသက်သာစေပါတယ်။
(၃) တစ်ဖက်လူရဲ့ဒေါသနဲ့ခံယူချက်ကို လက်ခံနားထောင်ပေးပါ သင့်ကိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့သူရဲ့ ခံစားချက်ဟာ ဘာပဲဖြစ်နေပါစေ လက်ခံနားထောင်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။ သူ့ဘက်က မှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှား နေသည်ဖြစ်စေ နားထောင်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှ သူ့ဘက်က မြင်နေတဲ့အမြင်က မှန်ကန်နေတယ်ဆိုရင် သင်လည်း ကိုယ့်အမှားကိုသိနိုင်ပြီး။ သူ့ဘက်က မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်း မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကို သူ့အတွက်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရာမှာ သုံးသင့်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းက လုပ်ငန်းကိုတစ်ခုကို ပိုပြီး ထိရောက်စေတယ်ဆို တာကို သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။
(၄) အချိန်ယူဖြေရှင်းပါ နာကျင်ခံစားနေရချိန်မျိုးမှာ ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းတာဟာ ကောင်းတဲ့အချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ သင်သတိရဖို့လိုပါတယ်။ သင့်စိတ်ထဲမှာ သင်ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဟာ သင့်ကိုနာကျင်နေစေတယ်ဆိုရင် အဲဒီ့အချိန်မျိုးနဲ့ ဒေါသတွေပြည့်နှက်နေချိန်မျိုးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မချပါနဲ့ဦး။ ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကြောင့် အမှားတွေများစွာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ လေ့လာမှု အတော်များများမှာ တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့် အနည်းဆုံး အချိန်၁၅မိနစ်လောက် အသက်ကို ပုံမှန်လေးရှူသွင်း၊ ရှူထုတ်ပြုလုပ်ပြီးမှ စကားပြောပါ။
(၅) စကားလွှဲလိုက်ပါ ဒေါသထွက်နေတဲ့သူတစ်ယောက်က သင့်ကို သူခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ထပ်ကာထပ်ကာပြောနေတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- လမ်းခရီးတစ်ခုကို သွားလို့ သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လမ်းကြောင်းက လမ်းပိတ်နေပြီး ကားတွေပိတ်ဆို့နေတယ် ဆိုပါတော့။ သူပြောတဲ့ လမ်းကသွားရင် ပိတ်မှာမဟုတ်ဘူး သင့်ကြောင့် ဒီလိုနှောင့်နှေးနေရတယ်လို့ ထင်နေရင် သူ့အတွေးထဲမှာ သင့်ကိုစိတ်တိုနေတာကြောင့် ထပ်ကာထပ်ကာ သင့်ကိုပြောနေပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုပြောတာနဲ့အတူ သင့်ကိုစိတ်ဆိုးပြီး ဒေါသတွေထွက်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ သူပြောနေတဲ့ စကားလမ်းကြောင်းကို လွှဲနိုင်မယ်ဆိုရင် သူ့ဒေါသတွေကို ပြေလျော့စေတဲ့အပြင် သင့်ကိုလည်း ဒေါသမထွက်တော့ဘဲ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(၆) Sorry လို့ပြောပါ သင်က ကိစ္စတစ်ခုခုကို မှားယွင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့မိတာကြောင့် သင့်အပေါ်ကို အရမ်းကိုစိတ်ဆိုးနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ မှားယွင်းခဲ့ပေမယ့် သင်ကြိုးစားပမ်းစားပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိအောင် ရှင်းပြပေးသင့်ပြီး ဒီကိစ္စတွေအတွက် Sorry ဆိုတာကို ပြောဖို့ တော့လိုပါတယ်။ သင်နဲ့တစ်ခါမှ အလုပ်တွဲမလုပ်ဘူးတဲ့သူ၊လူုစိမ်းတစ်ယောက်ဆိုရင် ပိုပြီး ရှင်းပြပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် မှာ ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့လည်း သင့်ဘက်ကနေ ပြောဆိုပေးပါ။ ဘယ်လိုမှ ရုတ်တရက်ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ သင့် အနေနဲ့ Sorry လို့ပြောဖို့ကို ၀န်လေးနေလို့ မရပါဘူး။
(၇) ကြင်နာစိတ်ထားပါ လူတစ်ယောက်အပေါ် ကြင်နာသနားတတ်တဲ့စိတ်ဟာ လူတိုင်းမှာမရှိတတ်ပါဘူး။ သင့်အပေါ်လူတစ်ယောက်က စိတ်ဆိုးဒေါသထွက် နေချိန်မျိုးမှာ သင့်ဘက်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာမျိုးဟာ ဖြေရှင်းရခက်ခဲတတ်ပေမယ့် အကြင်နာတရားရှိတတ်သူတွေမှာတော့ အဖြေတစ်ခုရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရာမှာ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကို ရရှိစေဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
(၈) အတင်းမတောင်းပန်ပါနှင့် ပြဿနာတစ်ခုကို ဘယ်သူကပဲကျူးလွန်ပါစေ ကိုယ်မမှားဘူးလို့တော့ လူတိုင်း ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရင် ပြီးတာ ပဲဆိုပြီး သင်က အတင်းကြီးတောင်းပန်လိုက်မယ်ဆိုရင် တကယ်တမ်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာမရောက်ဘဲ သင့်ကို အထင်လွဲသွားနိုင်တာ ကြောင့်ပါ။ သင့်လက်ရှိ အခြေအနေနဲ့ ပုံစံကိုသာပြောပြပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုကြိုးစားပါ။
(၉) လေးစားသမှုရှိပါစေ လူတွေကို လေးစားသမှုနဲ့ဆက်ဆံတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ သင်က ရိုင်းပျတဲ့အပြုအမူရှိရင်တော့ သင့်ကို ဘယ်သူကမှ အပေါင်းအသင်း မလုပ်ချင်ပါဘူး။ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးလေးစားသမှုနဲ့ ဆက်ဆံတာဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုလည်း မြင့်မားစေပါတယ်။ ယဉ်ကျေးလိမ်မာတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ဒေါသနဲ့ဆက်ဆံတတ်တဲ့သူနည်းပါတယ်။
(၁၀) လှောင်ပြောင်ခြင်းကင်းပါစေ သင့်သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပါစေ စိတ်ဆိုးနေချိန်မျိုးမှာ သင်ကရယ်မောပြီးဂရုမစိုက်သလိုနေမယ်ဆိုရင် သင့်ကိုပိုပြီးဒေါသထွက်ကာ အထင် မှားစေပါတယ်။ ဒါက အစ အနောက်သန်သူတွေမှာ ပိုပြီးအဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာပါ။ တချို့တွေက တစ်ဖက်လူဒေါသထွက်နေချိန်မျိုးမှာ အစအနောက်သန်တာကြောင့် ဒေါသကို ပိုပြီးဖြစ်စေအောင် လှုံ့ဆော်သလိုမျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်အပြုအမူက ဒေါသထွက်နေတဲ့ တစ်ဖက်လူအတွက် ပိုပြီးခံရခက်စေတယ်ဆိုတာကို နားလည်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
(၁၁) သံသယကင်းပါစေ သံသယရှိတာက လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဥိးကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာတင်မကပါဘူး။ ကြီးမားတဲ့ ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေကိုဖြစ်စေ ပါတယ်။ သင်က တစ်ဖက်လူအပေါ် သံသယရှိပြီဆိုတာနဲ့ သင်တို့နှစ်ဦးကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ အဆင်မပြေနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို သံသယရှိတယ်ဆိုရင် ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
Credit: The Chic
Categories:	Articles, Education	/ No Responses / by Ko Sai
Post Author: Ko Sai
၂၁ ရာစု စာသင်ခန်းများ အခင်းအကျင်း
၂၁ ရာစု စာသင်ခန်းများ...
Articles, Education, Knowledge ... , Read More
Articles, Knowledge	Read More
ဘ၀ကို ဆုတောင်းယူလို့ ရပါသလား ဆုတောင်းယူပြီးရတဲ့...
Articles, Dhamma	Read More
နှစ်မိနစ်ဖြင့် ဘ၀အမောပြေစေမည့် နည်းလမ်းများ
ကလေးတွေ ဘယ်အရွယ်မှာ ငွေအကြောင်း ဘယ်လောက် သိထားသင့်လဲ
ကလေးတွေ ဘယ်အရွယ်မှာ ငွေအကြောင်း ဘယ်လောက်...